musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Akasiyana Nhau » Cycas Akanakidzwa neKubuda muSwitzerland
Cycas Hospitality inoramba ichiendesa mberi chirongwa chayo chekuwedzera, sezvo mwedzi uno yakasaina hotera yayo yekutanga yeSwitzerland.
Iyo 119-makamuri Holiday Inn Express & Suites Sion ichashandiswa nemubairo-anohwina pan-European opareta pasi pechibvumirano chake chekutanga chekurenda neboka rekudyara reCredit Suisse Asset Management.
Cycas uye IHG Hotels & Resorts vakabatana kuunza yechipiri Holiday Inn Express & Suites pfungwa kuSwitzerland.
Iyo Cycas portfolio ikozvino inovhara 6 nyika dzeEurope - Belgium, France, Germany, The Netherlands, Switzerland, uye UK.
Painovhurwa mumatsutso 2024, iyo nyowani-yekuvaka chivakwa ichapa musanganiswa we95 classic Holiday Inn Express makamuri uye makumi maviri nematatu emasutu ane kitchenette neSion's chiteshi chechitima, pamwe neiyo-saiti yepasi yekudyira kutora mukana wenzvimbo yayo ine mhepo mukati me. dunhu idzva reCour de Gare uye nehoro itsva yekonzati. Vaenzi vachakwanisawo kutora mukana we24/24 gym uye imba yekusangana.
Hotera iyi ichange iri pamwoyo webudiriro huru yekutengeserana inotarisirwa kukwirisa pachinzvimbo cheSion senzvimbo yehupfumi neyekutengeserana uye kubatanidza nzvimbo yeguta ine simba neguta rekare.
Iyo itsva Cour de Gare purojekiti, inotungamirwa naComptoir Immobilier, ichaunza pamwechete pamusoro pe10,300m² yemahofisi, mazana matatu edzimba uye 300m² yenzvimbo yekutengesa. Iyo yakaoma ichabatanidza imwe yekonzati huru uye horo dzemusangano muValais canton - yakanamatira pahotera - pamwe nekupaka mota dzepasi pevhu dzemotokari mazana matanhatu nemakumi maviri neshanu.
Hotera iyi zvakare yakanyatsoiswa yeEPFL Valais Wallis sainzi yekutsvagisa sangano - nzvimbo yehunyanzvi ine vashandi vanopfuura 400 - iyo inosanganisira kembasi yayo yeEnergypolis School of Engineering.
Seguta guru reValais - imwe yenzvimbo dzinonyanya kufarirwa dzevashanyi muSwitzerland - hotera nyowani iri panzvimbo yakanaka yekutora mukana weEurope inonyanyozivikanwa nzvimbo dzekutandarira. Four Valleys, nzvimbo huru yeSwitzerland yeskiing, parizvino ingori maminetsi makumi matatu ekutyaira, asi inogona kusvikika zvakanyanya mukati memakore mashoma ekuvhurwa kwehotera kana chirongwa chitsva chemotokari chetambo chikaenderera mberi chichipa yakananga maminetsi makumi maviri kubva chiteshi chakavakidzana kuenda kumateru.
Sion zvakare iri mukati meawa imwe kusvika kuZermatt, Verbier, Chamonix Mont-Blanc uye Portes du Soleil. Ndiyo yakakura yakabatana ski nzvimbo munyika.